Kushambadzira pamhepo: chii icho uye ndeapi marudzi ekushandisa muCommerce | ECommerce nhau
Paunenge uine eCommerce, kana peji rewebhu, iwe unoziva kuti kushambadzira kwepamhepo kwakakosha nekuti, kuburikidza nako, unogona kuita kuti vashandisi vazive iwe, vakushanyire uye hongu, ivo vanotengawo kubva kwauri. Asi izvi hazvisi nyore.
Unoziva here chii chiri kushambadzira pamhepo? Uye mhando dziripo? Kana iwe uchifunga nezvayo izvozvi, pano isu tinokupa iwe makiyi kuti iwe uinzwisise 100% uye uzive kuti ndeipi yakakodzera bhizinesi rako.
1 Chii chiri kushambadzira pamhepo
2 Zvakanakira nekuipira kushambadzira kwepamhepo
3 Mhando dzekushambadzira pamhepo
3.1 SEM kana yekutsvaga injini yekutsvaga
3.3 Online vhidhiyo kushambadzira
3.4 Zvemagariro enhau kushambadzira
3.6 Kushambadzira kwenhare
Chii chiri kushambadzira pamhepo
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva nezve kushambadzira kwepamhepo ndechekuti pfungwa yacho inova inochinja, kungofanana nedanho kwainoshanda, iyo Internet. Tinogona kutsanangura kushambadzira kwepamhepo se "Kushambadzira kunanga kune vateereri vachishandisa Indaneti nechinangwa ichi". Mune mamwe mazwi, izvo zviziviso zvinotisvikira paInternet kushambadza mabhizinesi, zvinyorwa, zvigadzirwa, nezvimwe. yekambani yakatarwa.
Pakutanga, kushambadzira pamhepo kwanga kusinga zivikanwe, kutaura zvazviri, vashoma vanoitengesa vakave mapiyona, asi sezvo Internet yanga ichizadza dzimba nekushanda, makambani mazhinji anosarudza kuisa mari yakawanda mukushambadzira kweInternet kupfuura kwepanyama, nekuti unogona svika vateereri vakawanda, kunyanya kana zvaitwa nemazvo.
Zvakanakira nekuipira kushambadzira kwepamhepo
Tichifunga izvo kushambadzira kwepamhepo kuri, hapana mubvunzo kuti kwakasimudzira kushambadzira kwepasirese kana kwepanyama. Zvisinei, zvinhu zvese zvine chikamu chazvo chakanaka uye chikamu chakashata.
Kana zvakanakira kushambadzira kwepamhepo Wakatarisana nefizikiki, iwe uchawana:
Meseji inosvika kuvanhu vazhinji. Chiyero chayo chakakura kwazvo, zvinopesana neyakagadzirwa roll iyo inongosvika kune chidiki chikamu chevateereri vateereri.
Mikana yekuyera padhuze ipapo. Mukushambadzira kwepasina internet unofanirwa kumirira kuti uone maitiro evanhu; online ingangoita nguva pfupi kuti uve nezviyero zvekuziva kana zvave kubudirira, zvinofanirwa kushandurwa kana, zvinopesana, zvinofanirwa kubviswa.
Pane kutaurirana nevanhu. Kazhinji kuburikidza nemasocial network, kunova uko vazhinji vanoenda izvozvi kuti vakwanise kutaura pane zvavanoita kana kuona.
Zvino, hazvisi zvese zvinhu zvakanaka. Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira nekutengesa pamhepo ku:
Svikira chete vanhu vanoshandisa iyo Internet. Kunyangwe paine vashoma uye vashoma vanhu vasingashandise, zvinokwanisika kuti vateereri vako havapo, uye iwe unofanirwa kushandisa dzimwe nzira dzekushambadzira.
Takatarisana nekuzadzwa kwakadai kwekushambadzira, vashandisi vanofuratira izvo kushambadzira. Izvi zvakajairika, kunyanya sezvo paine makambani mazhinji anoshambadza uye anoita kuti vashandisi vapedzisire vatarisa pazvikamu zvinovafadza vosiya vamwe.
Hapana zvekudzvanya. Izvi zvinokonzeresa kushambadzira kunotsausa kunotungamira kune asina kuvimbika mawebhusaiti, komputa yekuona hutachiona, nezvimwe. Izvo zvinokonzeresa kuti komputa uye zvemukati zvikuvadzwe, saka vazhinji havadzvanye pamabhena kana kushambadzira nekutya izvi.
Mhando dzekushambadzira pamhepo
Paunonzwa nezve kushambadzira kwepamhepo, chinonyanya kuitika ndechekuti iwe unofunga nezvemabhanhire aunowana kubhurawuza, kungave kuburikidza nepeji kana kuburikidza nesocial network. Nekudaro, iwe unoziva here kuti zvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu zvinofungidzirwa kushambadzira pamhepo?
SEM kana yekutsvaga injini yekutsvaga
Iyo mhando yekushambadzira iyo inoshandisa iwo akakosha mazwi ekutsvaga Kushambadzira, ndiko kuti, mazwi akakosha ayo kubhadhara kushambadza navo uye nekudaro usvike kune vazhinji vashandisi, kunyanya kana iwe uri papeji rekutanga reinjini dzekutsvaga, senge Google.
Kuti ndikupe pfungwa, ndiwo mabhatani ekutanga anowanzoonekwa, dzimwe nguva anodzokororwa, kana iwe uchitsvaga, asiwo izvo zvinoonekwa mukoramu yekurudyi yeinjini yekutsvaga, kana kunyangwe muGoogle Shopping.
Mabhanhire anozivikanwa nekuti ange aripo kwenguva yakareba. Ndezve nzvimbo dzakagadzirwa zvine hungwaru kushambadza pejiay, kana zvichibvira, zvakare kuisa chinongedzo nenzira yekuti, nekudzvanya pairi, zvinotitora kuenda kune iyo peji rewebhu paunoda iwe (kazhinji iro rinoenderana nebhena chairo).
Online vhidhiyo kushambadzira
Uye kana tisati tataura nezve chishambadziro chekare kwazvo, ikozvino tiri kutaura nezvechizvino-zvino. Izvi zviri kuonekwa seimwe yeakasimba kwazvo aripo uye anogona kuverengerwa mune chero fomati yekushambadzira, kungave neemail, nemasocial network, mumabhanhire ...
Vhidhiyo kushambadzira inozadzisa kukwezva zvakanyanya kupfuura mabhana izvozvi (nekuti vanhu vazhinji vanotovaregeredza kana vavaona). Inopawo kukura kukuru, uye pazviitiko zvakawanda kuswedera padyo nekambani.
Kwete mabhana chete, ayo aripo, asi isu tinotaura nezvazvo nzira dzakananga uye dzakananga dzemakambani kushambadza. Ndeapi angave akanangana matekiniki? Zvakanaka, semuenzaniso, pane yako kambani peji, isa zvigadzirwa zvaunoda kutengesa, kana kushambadzira yako kambani. Panyaya yeasina kunangana, zviri pamusoro pezvese kushandisa vanotsigira kana vanokurudzira vanoratidza zvigadzirwa zvekambani uye votaura nezvazvo, kana zvakare nezve iyo kambani pachayo.
Pamwe pamwe nemabhanhire, kushambadzira kweemail zvakare kwekare, kunyangwe iwe uchifanirwa kuziva mashandisiro aungaita zvakanaka kuti usatariswe kutaridzika kunge spam kana kuverengerwa account yako, izvo zvingave zvakaipisisa. Kana iwe ukangwarira, inogona kuve kushambadza iyo inokuunzira iwe mabhenefiti mazhinji, sezvo uchigona tumira mameseji akasarudzika kune vatengi uye nekudaro svika panguva yakakodzera kwazvo kwavari (kugadzirisa dambudziko).
Neyekushambadzira nharembozha yatiri kutaura nezvayo SMS iyo neimwe nzira yakadzoserwa mukungovawo zvavo kushambadza. Zvisinei, kunyangwe paine chokwadi chekuti vazhinji vanozeza kurudzi urwu rwekushambadzira pamhepo, chokwadi ndechekuti zvinoshanda.
Kupfuura 95% yemameseji aya anoverengwa mukati memaminitsi ekuigamuchira, uye mazhinji acho anowana kusangana.
Hatigone kukanganwa nezve pop ups sekushambadzira kwepamhepo. Zvino, kunyangwe ichiri kuramba ichishandiswa, uye ichive ichiwedzera kuwanda, zvinofanirwawo kutaurwa izvozvo ndiyo inonyanya kuvhiringidza uye inogumbura kushambadza kwese.
Ehe, uchavaita kuti vakuone, asi chokwadi ndechekuti inogona kupedzisira yakanganisa peji nekuti ivo vanoda kuvhara iyo pop up uye kuvhara iyo browser, kana ivo vanotsamwiswa nekukanganisa uye havadi kuenderera kwavaive.
Sezvauri kuona, kune akawanda marudzi ekushambadzira epamhepo uye mune imwe neimwe nyaya imwe kana imwe ichashanda zvirinani. Ino ndiyo nguva yekuongorora eCommerce yako kuti uzive kuti ndechipi pane zvese chingave chiri nani kuisa mari mairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kushambadzira pamhepo
Kushambadzira zviitiko zvekambani
Chii chinonzi CMS